Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 18
Raha mahavita mahita ny zava-manahirana ny astra, inona no antony tsy ahafahan'ny fanahy mifehy ny fampahalalam-baovao mahafeno ny tanjaky ny tarika malaza?
Ity fanontaniana ity dia manondro ny fitsapana izay nametrahan'ny Fikambanana Mpiaro ny Fiahiana ny olom-peheziny. Voalaza fa nanolotra ny isa dimy arivo dolara izy ho an'ny fampahalalam-baovao izay afaka milaza ny isa misy ny orana rehefa raraka avy ao anaty kitapo ao anaty harona na zavatra hafa mitovy aminy.
Hatramin'izao fotoana izao dia tsy misy na iza na iza afaka maminavina na manambara ny isa orana eo amin'ny latabatra na ao anaty harona iray, na dia maro aza no nanao izany.
Raha tokony omena ny valiny marina, dia tokony homena azy amin'ny alalan'ny faharanitan-tsain-kevitra na ny tsiambaratelo izay mifehy ny media. Raha toa ka afaka mamaha ny olana ny faharanitan-tsainan'ny fampahalalam-baovao dia tsy ilaina ny fanaraha-maso; Na izany aza dia tsy namaha ny olan'ny orinasa na ny fifehezana ny olana. Ny olana dia tsy midika fa ny fahafahana mahita amin'ny raharaha, fa ny manitsy tarehimarika. Ny fampitam-baovao sy ny fanaraha-maso dia mety afaka mahita amin'ny adihevitra, toy ny ankizy amin'ny alalan'ny fitaratra iray dia mahita ireo olona mandalo eo ampovoan'ny arabe. Fa raha tsy nianatra ny fizotran'ny sainy ny zaza dia tsy ho afaka hilaza ny isa eo anoloan'ny varavarankely amin'ny fotoana rehetra izy. Ilaina ny fisainana voaofana amin'ny fanisana ka afaka mampiakatra haingam-pandeha be dia be, ary mbola mila ampianarina ihany koa ny saina izay afaka milaza hoe firy ny vola madinika ao amin'ny tarika na olona firy amin'ny olona.
Amin'ny ankapobeny, ny fomba fisainan'ny media dia tsy latsaky ny lamandy, ary ny fanaraha-maso ataon'ny fampahalalam-baovao dia ambany ny salan'isan'ny olombelona tsotra. Ny fanamafisam-peo na fanaraha-maso ny fitaovana iray dia mety ho toy ny ankizy ao amin'ny trano famakiam-boky, ny zavakanto zavakanto na zaridaina voninkazo, jereo ireo zavatra ao anatiny. Tahaka ny zaza ny fanaraha-maso ny fampielezam-peo na ny mpanamory dia mety hiresaka momba ireo boky hafahafa amin'ny tranga sarobidy, na ireo zavakanto mahavariana, ary ireo voninkazo tsara tarehy, saingy mety ho very fahaverezana hiatrehana ny foto-kevitra ireo boky, hitsikerana sy hanoritsoritra ireo harena afovoany na hiresaka momba ny voninkazo amin'ny teny hafa ankoatra ny famaritana. Ny fahafahana mamantatra amin'ny zava-manahirana dia tsy ahitana ny fahafaha-mahalala ny zavatra hita.
Ny valiny mivantana amin'ny fanontaniana mikasika ny antony tsy ahafahan'ny fampahalalam-baovao mahafeno ny fepetra dia: satria tsy nisy olona nanabe ny sainy ka afaka manitsy amin'ny ankapobeny ireo singa mamorona be dia be. Izany no antony tsy ahafahan'ny fampahalalam-baovao manazava ny isan'ireo orana ao anaty kitapo na harona lehibe. Ny "fitantanana ny fanahy" dia tsy mahafantatra intsony, izay misy ny fiasan'ny saina, fa tsy ny eritreritr'io fanaraha-maso io no nahafantarana azy tamin'ny fotoana nanaovana ny fitsipiky ny olombelona.
Raha toa ny iray tamin'ireo mpanatrika dia afaka nanatontosa ny asa ara-tsaina amin'ny famahana ilay isa ary hitazona ilay isa ao an-tsainy, na ny fifehezana na ny medium dia afaka manome ny valiny. Saingy raha tsy misy ny toe-tsain'ny tsirairay amin'izao fotoana izao, dia tsy afaka manao izany koa ny fifehezana. Tsy misy fanaraha-maso ny fampielezam-peo afaka manatanteraka tetik'asa ara-tsaina izay mbola tsy vitan'ny olombelona.
Inona no fanazavana azon'ireo soso-kevitra momba ny horohoron-tany ho an'ireo horohoron-tany mahatsiravina izay matetika mitranga, ary mety handrava olona an'arivony?
Araka ny Theosophy, ny zavatra rehetra eo amin'izao rehetra izao dia mifamatotra. Ny olombelona, ​​ny zavamaniry, ny biby, ny rano, ny rivotra, ny tany ary ireo singa rehetra dia mihetsika sy mifampihetsika. Ny vatana mangatsiaka dia mihetsiketsika ataon'ny vatana mangatsiaka, ny vatana tsy manan-tsaina dia mihetsiketsika noho ny faharanitan-tsaina, ary ny zava-drehetra dia mivezivezy manerana ny sehatry ny natiora. Ny loza rehetra dia vokatry ny antony iray. Ny vokatra tsara rehetra na ny vokatra tsara na ratsy dia vokatry ny eritreritry ny olona.
Ny eritreritry ny olona manodidina na miakatra sy miforona anaty vondrona na rahona tahaka ny teo ambony sy manodidina an'ireny olona ireny, ary ny fisainan'ny rahona dia avy amin'ny toetry ny olona izay mamorona azy. Ny eritreritra tsirairay momba ny olona tsirairay dia manampy amin'ny fitambaran-kevitra ankapobeny izay raisina amin'ny vahoaka. Noho izany, ny firenena tsirairay dia mihantona eo ambonin'izany ary ny momba ny eritreritra sy ny toetry ny olona monina ao amin'ilay tany. Satria ny rivotry ny tany dia miady amin'ny lalao izay misy fiantraikany amin'ny tany, noho izany dia misy fiantraikany eo amin'ny tany koa ny ati-rivotra amin'ny rahona ny eritreritra. Amin'ny maha-singa mifanditra ao amin'ny rivotra iainana, dia miteraka sy mahita ny oram-batravatra amin'ny oram-baratra, noho izany ny eritreritra mifanohitra amin'ny toe-tsaina dia tokony hahita ny fitenenany amin'ny alalan'ny fisehoan-javatra ara-batana sy ny tranga toy izany.
Ny rivotra iainan'ny tany sy ny rivotry ny sain-dehilahy dia maneho ny herin'ny tany. Misy fiantraikan'ny hery ao anaty sy ivelan'ny tany; Ireo hery sy ny asany amin'ny ampahany manokana amin'ny tany dia mifanaraka amin'ny lalàna ankapobeny izay mifehy ny tany manontolo. Koa satria miseho eo amin'ny sehatra samihafa eto an-tany ny hazakazaky ny olona, ​​ary ny tany koa dia tokony hanova ny rafitra mandritra ny vanim-potoana, ny fiovana ilaina amin'ny fampandrosoana ankapobeny dia tsy maintsy atao, ka mahatonga ny fiovana ny fihodinan'ny alan'ny tany sy ny firindran'ny tany.
Ny horohoron-tany dia vokatry ny ezaka iray, amin'ny ezaka ataon'ilay tany mba hanitsiana ny heriny izay mampisy fiantraikany eo amin'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fampitoviana azy ary ny hampifandanja azy amin'ny fiovany. Raha maro ny olona ravan'ny horohoron-tany, dia midika izany fa tsy ny tany ihany no manitsy ny tenany araka ny planina jeografika, fa ny ankamaroan'ireo izay mijaly noho ny antony mahatsiravina izay efa ananany dia niteraka.